3F kiraro famolavolana rindrambaiko - China 3d kiraro famolavolana rindrambaiko Supplier,Factory -LARY
niantso anay: 0086-0574-88133587-801 / 0086-13958255267 Email Us: [email protected]
Fingotra hany tsindrona koronosy milina
3D kiraro scanner farany
3D Shoe hany famolavolana rindrambaiko
Kiraro fingotra hany
Fingotra tsindrona koronosy Machine
Home » Products » 3D Shoe hany famolavolana rindrambaiko
Fashion kiraro faladianao
Asa kiraro faladianao
Casual kiraro hany
Sports kiraro faladianao
3F kiraro famolavolana rindrambaiko
Hijery ny sary lehibe kokoa
matihanina ny kiraro fingotra hany tsindrona milina
larystudio 3D hany kiraro famolavolana rindrambaiko
Place ny Origin
Aondrana File Type
IGES, STEP, VDA, DWG, DXP sy STL rakitra, sns
Mombamomba ny Payment
Larystudio 3D Shoe Design rindrambaiko tonga avy any Eoropa—mora miasa, creat tena mafy orina modely ho an'ny famokarana CAM.
3D kiraro famolavolana rindrambaiko ho an'ny kiraro irery, ambony kiraro, kiraro bobongolo sy ny kiraro sns hany bobongolo.
3F kiraro famolavolana rindrambaiko Description:
3D Shoe Design rindrambaiko tonga avy any Eoropa—indrindra matihanina 3D kiraro famolavolana rindrambaiko.
- A rindrambaiko notendren'Andriamanitra ho vokany, ary koa ny sary azo ampiasaina amin'ny famokarana CAM
- Special surface modeling teknolojia sy ny am-polony ny asa mahasoa ho an'ny kiraro planina
- Perfect fampidirana amin'ny Lary 3D scanner, mifototra amin'ny kiraro 3D farany rakitra modely hitondrana fampianarana ambony kiraro, anaty kiraro, kiraro sy ny kiraro lasitra tokana izay tsy miraharaha miverimberina modeling asa.
Shoe hany famolavolana partten
Kiraro bobongolo famolavolana partten
Ambony kiraro famolavolana partten
Famakafakana ny tranga azo ampiharina Larystudio 3D kiraro famolavolana rindrambaiko
1. Ny rindrankajy miaraka amin'ny maro karazana teknolojia curve modeling mahatonga ny tena sarotra modely 3D famolavolana mora kokoa. Afaka mahatsapa ny endrika rehetra ny heviny ny rindrankajy mora foana.
2. Famolavolana rehetra antontan-kevitra azo ampiharina mivantana hamolavola famolavolana, 3D pirinty, na ny CNC fanodinana amin'ny CAM rindrambaiko mba tsy miverimberina modeling, ary farany ampiasaina amin'ny famokarana dingana.
3. Ny tsy manam-paharoa mafy orina-surface mifangaro modeling teknolojia mahatonga ny ambony rehetra kiraro, famolavolana sy ny endriky anatiny marina irery tia ny 3D kiraro modeling farany mba hahazoana antoka ny fampiononana ny kiraro vita.
Ningbo Lary Industry Technology Co., Ltd dia mpiara barotra amin'i Portiogaly TECNIROLO Engenharia Industrial S.A. Lary dia injeniera & orinasa mpamokatra entana orinasa izay handova ny foto-kevitra ny manome mpanjifa amin'ny tolotra tsara indrindra any Eoropa noho ny mihoatra noho ny roa years.Lary no nanao ny vokatra fampiroboroboana sy ny fanompoana ao kiraro orinasa teknolojia amin'ny Portiogaly TECNIROLO. ankehitriny, Lary ny amin'izao fotoana izao dia ahitana vokatra: kiraro fingotra soleinjection bobongolo milina, avo fametrahana mazava tsara & hafainganam-pandeha fingotra tsindrona milina, 3Dscanner for kiraro farany, 3D kiraro famolavolana rindrambaiko sy 3D printy.
TecniRolo - Portiogaly sy Lary Industry - Shina dia maromaro ny orinasa izay miasa ho toy ny vahaolana maneran mpamatsy ho an'ny tambajotra iraisam-pirenena eo amin'ny 16countries.
Add: No.9East ny Jingu Afovoany Road, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang China
Hihy fingotra hany in Europ
New endrika kiraro fingotra hany taratasy
New endrika kiraro fingotra faladiany ho an'ny fanaovana
Double loko hany kiraro asa tanana
Address:& NbspNo.9 Jingu Middle Road, Yinzhou District, Ningbo City, Shina
Mamelà hafatra: Contact Ankehitriny
Newsletter SubscribeMidira raha te ny newletter sy handray ny tendollars tapakila
Copyright © 2018 Ningbo Lary Industry Teknolojia Co., Ltd. Support By Worldsou